Ulenza njani ixesha elidlulayo | Abadali be-Intanethi
Hayi Ndithi kuni nada nuevo si te ukumbao que ezininzi eziphathwayo de Los últimos años ya tKulungileen ukubakho kokurekhoda ividiyo kwiscreen esigcweleyo okanye kwimodi yokurekhoda eqhubekayo. Si lo hAces en le ndlela yokugqibela, el i sixhobo va kubambaNdihamba ngenyawo el i vidiyo isono parar, nzimangaphambili el tohpo que umtshatoIntoni. Así que, al final del dndiya, tKulungilees un vídeo de unas indeleloas en el que aparecen ukubados Los Movimintoos del mómbi.
Kuvakala kulula, kodwa mhlawumbi le nto uyikhangelayo ziziphumo zobungcali. Okulandelayo sikufundisa indlela yokwenza ixesha lokuhamba ngezixhobo ezahlukeneyo.
1 Lithini ixesha lokuphela?
2 Indlela yokwenza ixesha lokuhamba?
3 Izixhobo zasimahla
3.1 Isixhobo sokuchitha ixesha
¿Qué es un ixesha-iphela?
Un ixesha-iphela (tiempo obolekileyoo) es una ubuchule obuqulathe ukurekhoda intshukumo ngexesha elifutshane kakhulu. Esta acciivuliwe, a su vez, se proyecta a una ndimangalisweocinto muy obolekileyoa izinyoro del i vidiyo. De Esta Ndodaxesha, se puede Kunjalo un proEzio muy rápumkile como si fuxesha extremadamente obolekileyoo.
Es la opciivuliwe ogqibeleleyoa for hi-acer vídeos de oopopayiales que se mueven a una ndimangalisweocinto yonke intoa, como Los inambuzaneos o Los mamíUkucimaos pequeños. El siphumokokuchitha final es i-bastngaphambili buhlungungaphambilindiqumrhu ya que una isenzo esiqhele ukuhlala imizuzu sinokubonwa kwimizuzwana embalwa.
Indlela yokwenza ixesha lokuhamba?
Ukuba awunayo ikhamera yobuchwephesha ungakhathazeki, kule mihla, uninzi lweefowuni zifaka inketho yokuchitha ixesha. Into yokuqala ekufuneka uyenzile kukuvula ikhamera yefowuni yakho kwaye ujonge inketho yokuphelelwa lixesha, xa uyifumene, kufuneka uyishiye ifowuni ikwindawo emiselweyo., mhlawumbi ixhaswa kwinto ethile okanye ngetripodi. Ngokuchasene noko, ukuba ifowuni yakho ayinalu khetho, unokukhuphela ezi zicelo zilandelayo:
yiyeke: Iiparamitha zinokulungiswa kwesi sicelo. Njengomzekelo, ikhefu lexesha. Iyafumaneka kuzo zombini i-Android kunye ne-iOS.
I-hyperlapse: Ngesi sicelo, kuya kufuneka uqale urekhode ividiyo eqhelekileyo kwaye emva koko uyingenise kuyo. Kuya kufuneka uqwalasele kuphela isantya ofuna ukuba ixesha lakho liphele ngalo.
Ukuphela kwesakhelo: Le app inenguqulelo yasimahla kunye nehlawulweyo. Ngeyokuqala ungahlela ukuphela kwexesha, ukongeza ukuqaqamba, umahluko okanye izihluzi.
Ukwenza i-time-lapse ngekhamera yeefoto, udinga kuphela isibali-xesha. Kwaye ukusilela oko, i-tripod ukuze umfanekiso uphume umile njengoko kunokwenzeka. Nangona ukumxhasa naphi na kuya kukunceda. Ukuseta ikhamera kungcono ukukhetha indlela yesandla M, kuba iya kukuvumela ukuba ukhethe isantya sokuvala kunye nokuvula i-diaphragm.
Amaxabiso owanikayo kwixesha phakathi kweefoto zakho aya kwenza umahluko phakathi kokudlula kwexesha elifanelekileyo kunye nesiqhelo. Akunjalo ukuba ufuna ukubamba ukuhamba kwemithi kunoko kwezinye iimoto. Kuxhomekeke ekubeni ikhamera yakho yiCanon okanye i-Nikon, kwi-Nikon awufuni isibali-xesha, kuba useto lwemenyu unokutshintsha ixesha phakathi kwefoto nganye. Endaweni yoko, kwiCanon, kufuneka uhlengahlengise ixesha kunye nokuvezwa.
Kukho nolunye ukhetho olunje iGopro ebandakanya inketho yexesha.
Isixhobo sokuchitha ixesha
ixesha-Lithumba, Isixhobo es una isixhobo esikuvumela ukuba uthathe ulandelelwano lweefoto ngexesha elithile, y a okuqhubekayoAngleivuliwe kudalaar un i vidiyo que muEstra la aparKulungileapha de la sekileuintlaka de imágenes, Esto for la giqumrhu que hayi tenga la haibhilinto de umphathiurar una sekileuintlaka de fotografías. Unokukhetha phakathi kwezihluzo ezininzi, ujikelezisa iifoto zakho, utshintshe ukukhanya phakathi kwabanye.
Umthombo: Ukusuka kwiLinux
FFmpeg yi isixhobo esivulekileyo somthombo wokuguqula iifayile zeaudio kunye nevidiyo. Esi sixhobo sine-API yamahhala, kwaye sifumaneka kumaqonga amaninzi. Ungarekhoda, uguqule kwaye usasaze iaudio kunye nevidiyo.
Ukwanalo nokukhetha ukwenza ixesha lokudlula.
enzaAVI es una aphai-ramintoa muy Versáukuba for la abaguqulayoiivuliwe de vídeo. Usebenzisa ulandelelwano lwemifanekiso erekhodiweyo ngaphambili, ungazilayisha kwesi sicelo ukuvelisa elakho ixesha.. Ungahlengahlengisa ireyithi yesakhelo ngokuthanda kwakho.
Engabonakaliyo IDub es un inkquboa ukuthandangaphandleo y de cóukumbao abiengalunganga for la edsakhlweivuliwe de señales de vídeo (múltindiyacela formatos iqukauyisiphelo AVI, MPEG, oluKhawulezayoixesha, y WMV) y odiyo (PCM, MPEG, MP3, AAC, OGG, FLAC, WAV, Njl.) en Windows. Lo que lo hi-eyisi tan espeinto es que, mI-ás que un ikhortthanda de ulusuíimpunduas, es una aphai-ramintoa de edsakhlweivuliwe de vídeo y odiyo utitshalaesyodwa, nge una U mboniso de usuArio muy intngaphandleudoti.
Kanye njenge-MakeAVI uya kuba nakho ukutshintsha isantya sezakhelo. Esi sicelo sinezihluzi, kunye neenketho ezahlukeneyo ezinjengokutshintsha ubungakanani beevidiyo zakho.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Ungakwenza njani ukuphelelwa lixesha
Ubasusa njani abantu kwi-photoshop